FlightGear 2020.3.12: Navoaka ny dikan-teny vaovao amin'ny simulator sidina | Avy amin'ny Linux
Linux PostInstall | 11/04/2022 06:00 | fampiharana, About us
Vao iray volana mahery izay no nambara fa a dikan-teny vaovao cool stable Open source sidina simulation lalao fantatra amin'ny hoe FlightGear efa navotsotra. Ity dikan-teny vaovao ity eo ambanin'ny laharana "Flight Gear 2020.3.12" Ampidiriko ny vaovao mahaliana sy mahasoa. Izay hambarantsika anio, mba tsy hipetra-potsiny.
Tsara ny manamarika izany vao herintaona mahery izay, sambany izahay no manatona amin'ny antsipiriany sy amin'ny antsipiriany, ity lalao mahafinaritra ity amin'ny dikan-teny stable teo aloha, izany hoe, ny 2020.3.11 version. Amin’izao fotoana izao, ny azy ireo ihany no hifantohantsika vaovao ankehitriny.
FlightGear: Simulator sidina loharano misokatra sy matihanina
Ary toy ny mahazatra, alohan'ny hidirana amin'ny lohahevitra androany, momba ny fanavaozana vaovao a lalao maimaim-poana sy misokatra ho an'ny GNU/Linux, ary indrindra momba ny "Flight Gear 2020.3.12", avelao ho an'ireo liana ireto rohy manaraka ireto ho an'ny sasany Lahatsoratra mifandraika. Amin'ny fomba ahafahan'izy ireo mikaroka azy ireo mora foana, raha ilaina, rehefa avy namaky ity boky ity:
"FlightGear dia simulator sidina loharano misokatra. Fanampin'izay, manohana sehatra malaza isan-karazany (Windows, Mac, Linux, sns.) izy io ary novolavolain'ireo mpilatsaka an-tsitrapo mahafeno fepetra avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. Ny kaody loharanon'ny tetikasa manontolo dia azo alaina ary nahazo alalana amin'ny alàlan'ny GNU General Public License.". FlightGear: Simulator sidina loharano misokatra sy matihanina
Hedgewars sy 0 AD: lalao tsara 2 hanandrana amin'ity taona 2022 ity amin'ny Linux
1 FlightGear 2020.3.12: Fanatsarana sy fanamboarana vaovao
1.1 Inona no vaovao ao amin'ny FlightGear 2020.3.12 version
1.2 Fampitandremana lehibe
FlightGear 2020.3.12: Fanatsarana sy fanamboarana vaovao
Inona no vaovao ao amin'ny FlightGear 2020.3.12 version
Araka ny hevitry ny lahatsoratra famoahana ofisialy 20.3.12, Daty 03 / 02 / 2022, ireto ny vaovao ankehitriny, mandrakotra fanamboarana bug kely sy fanatsarana amin'ny faritra maromaro:
Inona ny vaovao: Fanampiana entana toy ny fanamarinana ny anaran'ny lahatahiry fiaramanidina, dingana antialiasing fanampiny (8x), endri-javatra ahafahan'ny fiaramanidina mamaritra endri-tsoratra manokana ho an'ny osg::Text, ary jiro fomba fiasa ALS mitambatra ary jiro Mpamorona. Ary farany, fitaovana isam-paritra vaovao ho an'i Aostralia.
fanamboarana: Avy amin'ny bibikely eo amin'ny fitadiavana lalana ho an'ny fijerena mialoha, ary momba ny meteorolojia fototra mamokatra haavon'ny tsindry tsy mety. Namboarina ny lesoka ao amin'ny rafitra fanamafisam-peo aseho rehefa manakaiky ny halavirana faratampony, fianjerana nateraky ny famerenan'ny rafitra, fianjerana rehefa tsy mety ny AI an'ny fiaramanidina, ary bibikely firafitry ny sari-tany ao amin'ny sosona RTE. Ary koa, ny fanamboarana ny fananana --view-offset dia natao mba hampiasana ny fananana marina. Ary farany, raikitra ny HUD, mba hitovy amin'ireo tondro mitsivalana ireo tondro mitsangana.
fanavaozana: Nanao fanatsarana ny dikanteny Rosiana sy Espaniola, fifanakalozan-kevitra momba ny toetrandro, Property Browser, mba hampisehoana ny soatoavin'ny lahatahiry amin'ny fomba verbose; ary ao amin'ny Route Manager, hisafidianana ny tondrozotra marina rehefa misy tondro-dalana roa sosona. Ary farany, nohavaozina ny programa fifamoivoizana AI ary nampiana modely AI vaovao.
Fanampin'izany, amin'ity dikan-teny ity dia efa natao ny manaraka fanambarana manan-danja:
"Ho an'ireo mpampiasa manararaotra ny fampidirana Swift anay hanidina VATIM, azafady mariho fa misy tsy mifanaraka amin'ireo mpizara VATSIM amin'izao fotoana izao mandra-panavaozana fanampiny sasany amin'ny FlightGear: ka hisy ny famoahana 2020.3.13 ato ho ato. herinandro, izay mamerina amin'ny laoniny mifanaraka amin'ny Swift."
Raha mila fanazavana fanampiny, momba izany sy ireo fanambarana hafa ho avy dia manoro hevitra izahay hitsidika tsindraindray ny anao Tranonkala ofisialyny Wiki y Blog. Ary koa, avy amin'ny tranonkala ofisialin'izy ireo ao amin'ny SourceForge. Fa raha te-hisintona sy hanandrana azy ianao dia azonao atao mivantana amin'ny findainao izany Fizarana fampidinana.
Raha fintinina, araka ny hitantsika, "Flight Gear 2020.3.12" Izany dia vaovao tsara, feno fanatsarana mahasoa. Inona no azo antoka fa hataon'izy ireo, io lalao io dia mijanona ho iray amin'ireo vitsy simulator sidina loharano misokatra, izay tena mahafinaritra. Fanampin'izany, mba ho tena mamolavola sy manabe. Manantena izahay fa ny fanavaozana vaovao dia hitohy hivoatra sy havoaka tsy tapaka, mba hitomboan'ny vondrom-piarahamonina mpampiasa azy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » FlightGear 2020.3.12: Navoaka ny dikan-teny vaovao amin'ny simulator sidina